Ana Rossetti. 4 nhetembo dzekupemberera zuva rako rekuzvarwa | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: Webhu Tigres de papel.
Anna Rossetti, Cádiz mudetembi uye munyori wenhau, bhavhdhe nhasi. Icho chimwe cheiyo manzwi zvinyorwa zvevakadzi inonyanya kukosha chemazuva edu uye akabata masutu ese. Kubva ku nhetembo uye eroottinen nganonyorwa vakakwira Nhau dzevana, ndichiita kuburikidza nebasa rakakura mundima. Basa rake rinotsigirwawo nemubairo wakasiyana. Ndinotora 4 nhetembo yakasarudzwa.
Akazvarwa mukati San Fernando, Cádiz, muna 1950, yakatanga kuzivikanwa mu 1980 paakaburitsa yake bhuku rekutanga of poems, Kudzungaira kwaErato. Naiye ndanga ndatokunda iyo Gules Nhetembo Mubairo muValencia. Pakati-ma80 akaburitsa mamwe maunganidzwa enhetembo, Zviratidzo zvemotokari y Munamato bhuku, uyo akatora iyo King Juan Carlos I Mubayiro. Uye pakupera kwegumi iro akaburitsa bhuku, Nhenga dzeSpain, uye bhuku rechina renhetembo rakanzi zuro.
Como munyori wenhaukuwedzera kune Nhenga dzeSpain, kune mamwe mazita e Unyengeri (ndiani akawana iyo Iyo Vertical Kunyemwerera Mubairo inoverengeka erotic) Ruoko rwevasande o Anopikisa. Mumakumi mapfumbamwe akawedzera mazwi ake kuruzhinji mwana nehudiki nemazita akadai Hunde izere nemadinosaurs, Usati wazvarwa o Nyaya dzakakodzera.
Sechido chekuda kuwedzera kuti ndizvo amai yemutambi Rute Gabrieri, unoonekwa mu Sesame Mugwagwa o Mazuva akaverengwa.
Paive nenguva apo rudo rwaive
mupindiri aitya uye aishuvira.
Bhurashi rinofungidzirwa, rakagadzirirwa, rakagadzirwazve panguva
husingararame husiku hwekurara.
Kureurura kwakashinga uye kunovhiringidza, kwakagadzirisa churu
nguva, yaisazombosvika kwairi kuenda.
Kugadzikana kusingaperi uye nehutsinye.
Kumhanyisa kamwe kamwe kwemoyo usingadzoreke.
Hondo inopfuurira yekurwisa kutadza kune utsinye
Chinetso chepedyo pakusiyanisa kushungurudzika kubva ku
Yakanga iri nguva yekuyaruka uye isina kukwana, nguva ye
rudo rusina zita, kunyangwe pasina chiso, chakatsika,
sekutsvoda kwechipikirwa, kuburikidza nenzvimbo yakasviba yeiyo
KANA UYEUKA, RUDO RWANGU ...
Kana iwe ukayeuka, mudiwa wangu, chii chakamirira iwe mushure
yakachengeteka kumirira madziro.
Kana iwe ukayeuka sei uye sei noutsinye! chishuwo chakapinda
anovanza kubaya kwake kwekuodzwa mwoyo.
Kana iwe ukarangarira izvo, kana iko kushuva kwaputika, chakavanzika
rega kuva nhovo nekutiza,
haungandiomere kuti ndikuratidze, kukupa,
Asi iwe waizorega wega kuti urarame mukati mangu mu ductile
kurota, uko kwese nzira dzeunyoro
iyo iwe yaunogona kugadzira inobvumidzwa, yega dutu mimhanzi
uye kutya hakuna kuchinjika.
Kana iwe ukarangarira, mudiwa wangu, chii chakamirira iwe mushure
masvingo akachengeteka emoyo wangu,
haungandimanikidze kutora zvombo kuzorwa newe, kukumisa,
kukuramba, kukubata muromo, kukutengesa ...
vasati vatora kubva kwandiri, kunyarara kwakanaka kwangu,
yangu chete pfuma, benzi uye isingachinjiki kunzwa.
Nhetembo inoti: iwe kana neni. Asi haitauri nezvako kana neni.
Inoti iwe kana ini, asi ndiwe iwe neni uye naye uye naye
uye mumwe nemumwe wedu,
nekuti muchirevo chega chega mune mubairo.Ukuwanda kwezviratidzo kunonzwisiswa
mune inoratidzika uye inozorodza isingori.
Nhetembo dzinoti ini, iwe, iye, iye ...
uye kune mumwe nemumwe wedu anotidoma
kubvisa mitsara yemweya.
Zvese uye imwe neimwe
isu tinosanganisirwa uye tinotsanangurwa.
Tese tiri panguva imwe chete iye, iye, iwe neni.
Kupedzisa rozari kumakamuri edu ekurara
tichaenda kumusoro uko ngirozi yakaipa,
uyo anoda kutitambudza, anotimirira.
Musana kumadziro, uchitarisira kuti mbatya
usavanze meso edu kwenguva refu,
flannel inonhuwirira yatipfekedza pakupedzisira.
Uye tinoziva, mushure mekubhururuka kwepuckered
kubva pamubhedha unodziya, ndiani anovanda.
Pane kamwe karuzha kadiki mukamuri rinobatana
isu tichapaza nepakati, pakati pemashiti matete
yeasina muslin, kusuwa,
Uye ivo vachatishamisa
uye zvisingaite isu ticharangwa,
akadzokera mukutyisa kwemakamuri ekurara.
Asi, ndibate zvino. Kupisa ngatizvinyaradze
kutya ikoko kuchauya, munguva pfupi, kugadzirira kutiparadza.
Kwayaka: Vanyori veAndalusian
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Ana Rossetti. 4 nhetembo dzekupemberera zuva rako rekuzvarwa